Xukuumadda Muuse Biixi Oo Bilowdey in Mashaariicyadda Dowladda Tolnimo ku Bixiso!!
Xukuumadda Cusub ee madaxweyne Muuse biixi cabdi oo mudadii la doortey ay ka wareegtay shan bilood ayaa shacabka somaliland u hanweynaayeen in isbedel badan ka muuqan doono dhinaca waxqabadka iyo dhinacyadda cadaaladda iyo saami qaybsiga xileed iyo mid mashaariiceedba.
Hadaba, waxaaa imika soo baxay eedo dhinac bixinta mashaariicda dowladda ah oo ay ka muuqato in cid gaar ah lagu naas nuujinayo.
Dhawaan waxaa xisbiga mucaaridka ah ee UCID soo bandhigay tiraba shan mashaariic oo xukuumaddu hore u shaacin jirtey tartanta loo gali jirey in cid gaar ah lagu naas nuujiyey. Taas oo waji gabax ku ah qaranka bar madowna u yeeleysa dowladda muuse biixi.
Dhawaan waxaa ay wasaaradda waxbarashadu ugu deeqdey dhul ku yaal deyrka iskuulka maxamuud ahmed cali dowladda hoose ee hargeisa, iyadoo dowladda hoose u qorsheysey in laga dhiso xarunta damdamiska degmadda maxamuud heybe, balse dhismahaas iyadoo aan la shaacin si maraaxeyneyn ah loo sii siiyey shirkadda dhisme oo hirgalisa. Sifo sharci ahna aan loo marin balse ay tahay qaraabo kiil iyo eexasho badheedh ah.
Guddida iyo odayaasha degmadda maxamuud heybe ayaa ku baraarugsan arrinkan iyagoo qorsheynaya in maalmaha soo socda soo bandhigaan cida dhisaysa iyo sida cadaaladda daradda ah ee loo maray shaacinta dalabka dhismahan.
Waxaa isa soo taraya guud ahaa dareenka bulshaddu ka qabto eexda iyo qaraabo kiilka durtaba ka soo if baxay xukuumadii loo hanweynaa ee madaxweyne muuse biixi.